गाईजात्राको रमाइलो ! (फोटो फिचर)
साउन ३१, काठमाडौं । हरेक वर्ष भाद्र कृष्ण प्रतिपदाका दिन दिवंगत आफन्त तथा पितृको सम्झनामा निकालिने गाइजात्रा शुक्रवार देशैभर मनाइएको छ । विशेषगरी काठमाडौं उपत्यकाका नेवार समुदायले मृतात्माको शान्तिको कामना गर्दै शहरका विभिन्न स्थानबाट सिंगारिएका गाई, कुमारी, बालक तथा युवालाई नगर परिक्रमा गराइएको छ ।...
तस्वीर : कस्तो राखी किन्ने होला !
सप्तरीको राजविराजस्थित बजारमा रक्षा बन्धनको अघिल्लो दिन बुधवार दिदिहरु आफ्नो भाईको लागि राखी किन्दै । हरेक वर्ष श्रावण शुक्ल पूर्णिमाको दिन मनाइने पर्व रक्षा बन्धनको दिनमा दिदिबहिनीले आफ्ना दाजुभाईको हातमा पवित्र धागो रक्षा बन्धन (राखी) बाँधेर मिठाई खुवाउने र दाजुभाईले दिदिबहिनीको रक्षा गर्ने वचतसहि...
फोटोफिचर : कपडा बैंकमा कपडा छान्दै सर्वसाधारणहरु
साउन २५, काठमाडौं । पवित्र मनले मानवीय सेवा शुरु गर्यो भने अवश्य पनि साथ र सहयोग हुँदोरहेछ भन्ने कुरा काठमाडौंको अनामनगरमा रहेको कपडा बैंकले पुष्टि गरेको छ । पवित्र उद्धेष्यका साथ शुरु गरिएको यो अभियानबाट गरिव दिन दुःखीहरुले आङ छोप्न पाएका छन् । अहिले यो बैंकमा क...
लोकसेवा आयोगको विज्ञापनको विरुद्धमा सडकमा उत्रिएका प्रदर्शनकारी (फोटो फिचर)
साउन २१, काठमाडौं । लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहका विभिन्न पदका लागि पछिल्लो पटक प्रकाशन गरेको विज्ञापन असमावेशी भएको भन्दै मंगलवार काठमाडौंमा विरोध प्रदर्शन गरिएको छ । आरक्षण बचाऔं आन्दोलनको नाम दिएर विभिन्न समुदायका व्यक्तिहरुले लोकसेवा आयोगले संघीयताको मर्म र समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त विपरित विज्...
नौं तस्वीरमा हेरौं नागपोखरीमा नागको पूजा (फोटो फिचर)
साउन २०, काठमाडौं । श्रावण शुक्ल पञ्चमीका अवसरमा सोमवार देशका सम्पूर्ण नाग मन्दिर र घरघरमा नागको पूजा गरिएको छ । सोमवार बिहानैदेखि विभिन्न नागको बासस्थान हुने स्थानहरु पोखरी, कुवा, इनारलगायतका स्थानमा नागको पूजाका लागि सर्वसाधारण पुगेका छन् । नागका थानमा पूजा गर्ने भक्तजनको भीड लागेको छ । प्राचीन...
तस्वीरमा हेरौं पशुपतिमा साउने सोमवारको रौनक (फोटो फिचर)
साउन ६, काठमाडौं । आज साउन महीनाको पहिलो सोमवार अर्थात् हिन्दु धर्मावलम्बीका लागि दिन विशेष महत्वको दिन । नेपालको जुनसुकै ठाउँमा बस्ने मानिसहरूले पनि साउनको सोमवार विशेष रूपमा भगवान् शिवको पुर्जा अर्चनाका साथ ब्रत बस्ने परम्परा रहँदै आएको छ । साउनको सोमवारलाई भगवान् शिवको वार मानिने भएकाले आजक...
असार २१, काठमाडौं (अस)। नेपालमा गलैंचाको माग बढि छ । त्यसमा पनि गलैंचा निर्यात धेरै हुन्छ । खपत भने स्वदेशमा भन्दा विदेशमै बढि भएको देखिन्छ । पहिला पहिला गलैंचाबुन्ने काम नेपालको हिमाली क्षेत्रमा मात्र गरिन्थ्यो । जसमा राडी, पाखीजस्ता बस्तुको उत्पादन गरिन्थयो भने विगत २२ वर्ष अगाडि देखि अलि गलैंचाक...
असार १५, काठमाडौं (अस) । आइतवार देशका अधिकांश धान रोप्ने खेतमा उत्सव मनाइयो । असार १५ लाई सरकारले राष्ट्रिय धान दिवसको रुपमा मनाउन थालेसँगै खेतमै औपचारिक कार्यक्रमहरु पनि आयोजना हुन थालेका छन् । तर धान दिवस घोषणा हुनुभन्दा अघिदेखि नै हरेक वर्ष किसानहरुले असार १५ लाई रोपाईं गरी दही चिउरा खाने दिनको र...
फोटो फिचर : १६ औं धान दिवसका क्रियाकलापहरु
असार १४,काठमाडौं (अस) असार १५ अर्थात् धान दिवस अझ भन्ने हो भने दही चिउरा खाने दिन । ‘धान खेतीमा प्रविधि र यान्त्रीकरण, चामल आयातमा न्यूनीकरण’ भन्ने नारासहित १६ औं धान दिवसका अवसरमा मुलुकका विभिन्न भागमा धान रोपेर धान दिवस मनाइयो । धान दिवसका अवसरमा कतै आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरेर धान रोपियो भने कत...
टीपी भुसाल असार १३, काठमाडौं । त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा शुक्रवार दिउँसो ‘बम थ्रेट’पछिको अवस्था परिकल्पना गरी पूर्णकालिन अभ्यास गरिएको छ । यो अभ्यास अन्तरराष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आईकाओ)को मापदण्ड र विमानस्थल आपतकालिन अभ्यास योजना अनुसार गरिएको त्रिभुवन अन्तराराष्ट्रिय विमानस्थल कार्...
नेकपाभित्र शक्ति संघर्ष चर्किने संकेत
तीन तहको सरकारमातालमेल नहुँदा विकास निर्माणमा समस्या
फलेवासमा लिफ्ट सिँचाइ आयोजना शुरू
सवारी व्यवस्थापन शुल्कमा वीरगञ्ज महानगरका ठेकेदारको मनपरी
मेची–महाकाली विद्युतीय रेलमार्ग : मुआब्जा विवादबारे छलफल गर्न वार्ता समिति गठन